Izinto ezilungileyo zeTshayina eziThengisayo ngePolyester yePolystyrene Umthengisi | Rayson
Rayson kwiRayson yeNdawo yezoRhwebo, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China. Iimveliso eziphambili zeMpahla eziPhambili ezivela eTshayina Ixabiso lePolyester yePolystyrene yoMthengisi
Umenzi weRayson Spring Mattress ulandela ngokungqongqo inkqubo yokuqinisekiswa komgangatho we-ISO9001 ukulawula nokulawula inkqubo yemveliso.
I-Rayson Global Co, Ltd yindibaniselwano ye-Sino-US, eyasekwa ngo-2007 ebekwe eShishan Town, eFoshan High-Tech Zone, kwaye ibekwe kufutshane namashishini adumileyo anje ngeVolkswagen, iHonda Auto kunye neChimei Innolux. Inyaniso
Silandela ngokungqongqo iinkqubo zolawulo lomgangatho esemgangathweni ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana okanye zigqithile kulindelo lwabathengi bethu. Ukongeza, sibonelela ngeenkonzo zentengiso yasemva kwexesha kubathengi kwihlabathi liphela. Oko kwamiselwa, uRayson ujonge ukubonelela ngezisombululo ezibalaseleyo nezinomtsalane kubathengi bethu. Simisele eyethu i-R
D iziko loyilo lwemveliso kunye nophuhliso lwemveliso. Ukuza kuthi ga ngoku, uRayson upasile isiqinisekiso senkqubo yolawulo lomgangatho wamanye amazwe Zonke iimveliso kubandakanya imveliso yethu entsha & zinikezelwa kuyilo olutsha, umgangatho oqinisekisiweyo, kunye namaxabiso okhuphiswano. Ndingazifumana njani iisampulu, emva kokuba uqinisekise ukunikezelwa kwethu kwaye usithumela iindleko zesampulu, siya kugqiba isampulu ngaphakathi kweentsuku ezili-15 ~ ezingama-20 Ungacela inkampani yokubonisa ukuba ithathe isampuli kwinkampani yethu okanye ungasithumela i-DHL, i-FedEx okanye i-UPS yokuqokelela inombolo yeakhawunti, singathumela isampulu kuwe ngeakhawunti yakho .Ungandinceda ndenze uyilo lwethu okanye ndisebenzise logo kwimveliso? Sinako ukwenza umatrasi ngokokuyila kwakho okanye ukubonelela ngenkonzo ye-OEM sifuna nje ukuba usinike imveliso yakho okanye imveliso yelogo. Ngaba ndingandwendwela umzi-mveliso wakho? Ewe, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu nangaliphi na ixesha, sikufuphi nesikhululo seenqwelomoya saseGuangzhou Baiyun, kungathatha iyure enye ngemoto, kwaye sinokucwangcisa imoto ukukusa.